April 2021 - Celegroup
April 30, 2021 Celegroup1975 0
ဘယ်အချိန်ကို စောင့်နေတာလဲ? မိဘကိုဘယ်အချိန် လုပ်ကျွေးမှာလဲလို့မေးလိုက်တိုင်းအလုပ်တွေ အဆင်ပြေရင်လုပ်ကျွေးမယ်လို့ဖြေကောင်း ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့မိဘတော်တော်များများကတော့သား သမီးတွေအလုပ်ကောင်းတွေ ရတဲ့အချိန်ထိအသက်မရှည်ကြတော့ပါဘူး။ မိဘကို ဘယ်လိုထားမှာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရွှေအိမ်ကြီးနဲ့ ထားချင်တာမထားနိုင်လို့အဲဒီလို ဖြေဘူးကြမှာပါ။တကယ်တော့ရွှေအိမ်ကြီး ဆောက်နိုင်တဲ့အခါမိဘေတြဟာအုတ္ဂူထဲ ရောက်နေပါပြီ။ မိဘကို ထောက်ပံ့သလားလို့မေးရင်ငါ့ကလေးတွေ ကိစ္စတွေနဲ့မလုံလောက်လို့မထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်း ဖြေမိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့သင့်ကလေးတွေ လက်လွတ်တဲ့အထိသူတို့တွေအသက်ရှည်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။သင့်စိတ်ကူးနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတို့ကို ပြန်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အချိန်ထိသူတို့ မနေရဖို့ များပါတယ်။ မိဘကို ပေးကမ်းလှူဒါန်းဖို့ပြန်လည်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကို မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကတျခားအရာ တခြားသူတွေကိုအရင်စဉ်းစား တွက်ချက်ကြပါတယ်။အဲဒါတွေကျော်လွန်မှအစွန်းထွက်အချိန်အစွန်းထွက် ငွေကြေးကိုသူတို့အတွက် ပေးကြတာပါ။ ဒါဟာလူတိုင်းနီးပါးပါ။သူတို့အလှည့်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်စဉ်းစားခဲ့တာ […]
ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဦးဆောင်သော သိုးအုပ် တိဘက်က သိုးအရမ်းမွေးမြူကြတယ်။ သိုးတွေကို ဝံပုလွေက လာလာစားတော့ သိုးအုပ်ပိုင်ရှင်က လာစားတဲ့ ဝံပုလွေကို သတ်ဖို့ ညဖက်စောင့်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ အဖြစ် တစ်ခုသွားတွေ့တယ်။ညဖက် ဝံပုလွေ လာခါနီးသိုးတွေက အနံ့ကြိုရတယ် ။ ဂဏာမငြိမ်တွေဖြစ်တယ် ။ အော်တယ်။ဟိုပြေးသည်ပြေးလုပ်ကြတယ် ။ ခဏနေတော့ ဝံပုလွေဝင်လာတယ် ။အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဝင်လာတာ ။တစ်ကောင်ထဲပဲ ။သိုးတွေမှာ အော်ပြီး ပြေးကြတယ် ။တစ်ခြံလုံးကို ညံနေတာပဲ။ တကယ်က သိုးအုပ်က […]
“လူပေါင်းမမှားပါစေနှင့် စေတနာနဲ့ မထိုက်တန်သူကို စေတနာ သိပ်မထားနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာ တွေ စော်ကားခြင်း ခံရတတ်တယ်အလေးအနက် မထားတတ်တဲ့သူအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပုံမအော မိစေနဲ့။တစ်နေ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ခံရတတ်တယ် တန်ဖိုးမသိတဲ့ သူကို တန်ဖိုးအကြောင်း မရှင်းပြမိစေနဲ့။။တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိတာမို့ပါ အရှက်သိက္ခာမဲ့သူကို ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီး မပေါင်းသင်းမိစေနဲ့။”တံငါနားနီ တံငါ ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး” ဆိုသလို အကျင့်စရိုက်တွေ ကူးစက်တတ်လို့ ကျေးဇူးကန်းတတ်သူကို ကျေးဇူးမပြုမိပါစေနဲ့။ကျေးဇူးတင် မခံရတာ ပြသနာမရှိပေမယ့်ကျေးဇူးကန်းရင် ဒေါသဖြစ်ရလို့ဂတိမတည်သူနဲ့အတူ […]
စကားလုံးတွေရဲ့ အဆိပ် နှုတ်ဖျားကထွက်လာတဲ့စကား ဆိုပေမယ့်နှလုံးသားနဲ့ ခံစားနားထောင်သူအဖို့အကြိမ်ကြိမ်သေရတယ်။ အသားမပဲ့ ဒဏ်ရာမပေါ်ပဲနှလုံးသားထဲထိ နာကျင်အောင်လုပ်နိုင်တာကတော့နှုတ်ဖျားက စကားလုံးတွေပါပဲ။ပြောသမျှစကားကိုနားဝတင်မဟုတ်ပဲနှလုံးသားနဲ့ နားထောင်မိသူတွေကတခြားသူတွေထက် ပိုခံစားရပါတယ်။ လူချင်း မမြင်မတွေ့ရပါပဲph တည်းက တစ်ဘက်လူရဲ့အသံအနေအထား လေယူလေသိမ်းကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်း ဝမ်းနည်းမှု နဲ့ဒေါသထွက်နေသလား ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ စကားလုံးတွေကို နားထောင်ခံစားသူတိုင်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ချို့စကားလုံးတွေကပြောလိုက်တဲ့သူကအမှတ်မထင် ပြောထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားနာရသူအတွက်တော့ ခံစားရစေပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ရင့်ရင့်သီးသီး နာကျင်အောင်မာနတွေရစရာမရှိတော့လောက်အောင်ချိုးနှိမ်ပြောဆိုပြီးမှသူတို့မဟုတ်တော့သလိုအလွယ်တကူ မေ့ပစ်လိုက်ကြတယ်။တစ်ဘက်လူရဲ့ခံစားမှု နာကျင်မှုကိုသူတို့အရေးမစိုက်ဘူး။ပြောပြီး ပြီးသွားတယ် ထင်ကြတယ်။ ကြမ်းကျွံရင် နှုတ်လို့ လွယ်ပေမယ့်စကားကျွံရင် နှုတ်ဖို့မလွယ်တာ […]
အတိုက်အခိုက် ခံရတယ်ဆိုတာဖတ်ကြည့်နော် မိုးရွာတိုင်း ရေမကြီးသလိုမိုးခြိမ်းသံ ကြားတိုင်းလဲမိုးကြိုးပစ် မခံရပါဘူး။လေတိုက်တိုင်း ပန်းမကြွေသလိုဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကြောင့်လဲမင်း ဘဝ မသေသွားပါဘူး။ လူဆိုတဲ့ အမျိုးကကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီးသူများ အတင်းကိုပြောတတ်ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေပါ။” ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အိပ်ရေး ပျက်တယ် “ဆိုတဲ့ စကားပုံလို ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုမင်း အလုအငြင်း လုပ်ပြီးအချိန်ပေး ဖြေရှင်းနေမယ်ဆိုရင်မင်းဘဝ တိုးတက်မှုလမ်းတွေနှောင့်နှေးပြီးမင်းရဲ့အချိန်တွေအချည်းအနှီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အလု အငြင်း ၊ အငြင်းအခုံအတင်း စကားတွေ ပြောတယ်ဆိုတာကအရည်အချင်း မရှိတဲ့သူအသိဉာဏ် မရှိတဲ့ […]
ဝဋ်ကြွေး၁၉ချက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ကပ်စေးနှဲ ကော်တရာဖြစ်ပြီး အလှုမလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး […]
ဆုံးမတတ်သူကို တန်ဖိုးထားပါ လောကမှာ မင်းကို ပြုံးပြတတ်သူထက်ဆုံးမတတ်သူက အလွန်နည်းပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများကအမိုက်ခံပြီး လူတစ်ယောက်ကိုဆုံးမသွန်သင်ဖို့ ဝန်လေးတတ်ကြတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့လူတစ်ချို့က ဆုံးမသွန်သင်တာကိုမကြိုက်ကြဘူးလေ။ လူဆိုတာ အမှားမကင်းသလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစေတနာသန့်သန့်ဖြင့် ထောက်ပြသွန်သင်တတ်သူကတစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လောက်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ပြုံးပြတယ်ဆိုတာကရင်ထဲက ပါချင်မှပါပါလိမ့်မယ်။ဆုံးမတာကတော့ သေချာပါတယ်။စေတနာအပြည့် ပါနေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ကိုဆုံးမတတ်သူတစ်ယောက်ရှိနေတာကသူငယ်ချင်းအယောက်တစ်ရာထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆုံးမတတ်သူကို တန်ဖိုးထားလေးစားပါ။ စိတ်ပျက်အောင် မလုပ်မိစေနဲ့နော်။ မေတ္တာဖြင့် Credit unicode ဆုံးမတတျသူကို တနျဖိုးထားပါ လောကမှာ မငျးကို ပွုံးပွတတျသူထကျဆုံးမတတျသူက အလှနျနညျးပါလိမျ့မယျ။ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့လူတျောတျောမြားမြားကအမိုကျခံပွီး လူတဈယောကျကိုဆုံးမသှနျသငျဖို့ ဝနျလေးတတျကွတယျ။အကွောငျးရငျးကတော့လူတဈခြို့က ဆုံးမသှနျသငျတာကိုမကွိုကျကွဘူးလေ။ […]
လူငယ်တွေကို အပြစ်မတင်နဲ့… 1. အချိန်ဖြုန်းတယ်။ အချိန်ဟာ သိပ်တန်ဖိုးရှိကြောင်း..လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ သက်သေတွေ ဥပမာ သာဓကတွေနဲ့ သေသေချာချာ နားဝင်အောင် ဘယ်သူသင်ပေးခဲ့လဲ? ကုန်သွားရင်ပြန်မရတာလောက်က လူတိုင်းသိတယ်.. ။ အလေလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ အမြဲ ဖိနှိပ်မယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေမှ အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးတာလား??? 2. အလုပ်မကြိုးစားဘူး ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်အရာကအဓိက ဘယ်အရာက သာမည ။ဘာကိုလေ့လာပြီး ဘာကိုရှာဖွေရမယ် ဆိုတာ ဘယ်သူက […]
ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်အရင်ကြည့်နိုင်ဖို့ရန် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမှားကနေလူတစ်ယောက်က အပြစ်ပြောဖို့အတွက်ဟာကွက်ကို စောင့်ကြည့်နေတတ်တယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုလူတစ်ယောက်က အခွင့်ကောင်းယူဖို့အတွက်အခါကောင်းကို စောင့်နေတတ်တယ် အဲဒီလိုပဲ လူဆိုတာက ကိုယ်အမှားကိုသာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ခဲရင်းတာ သူများအမှားကြတော့ဆီလိုအပေါက်ရှာပြီး ကြည့်တတ်တယ် မြင်တတ်တယ်ပြောတတ်ကြတယ် ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတိုင်း သူ့မှာလူဆိုးကြီးဖြစ်ရမယ်တဲ့လားကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်စီးမပေးတိုင်း သူ့မှာအပြစ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့လား မတရားလိုက်တာအဲဒါစိတ်သဘောထား မမှန်ကန်မှုစိတ်သေဘာထား ယုတ်ညံ့မှု လက္ခဏာပဲ ကိုယ့်ရဲ့အလှ မှန်ထဲမှာကြည့်မှ မြင်နိုင် သိနိုင်သလိုကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်သဘေားထား မှန်မမှန်ကောင်းမကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့အသိအလိမ်မာဥာဏ်ပညာနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြား စီစစ်မှ မြင်နိုင် သိနိုင်ပါလိမ့်မယ် […]
လိုတာထက် ပိုသွားမိရင် လူတစ်ယောက်ကို လိုတာထက်ပိုပြီးဂရုစိုက်မိရင် အဲဒီလူရဲ့ ဥပေက္ခာပြုမှုတွေကိုသာသင် ပြန်ရလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်ကို လိုတာထက်ပိုပြီးပေးဆပ်အနစ်နာခံမိရင် အဲဒီလူရဲ့တန်ဖိုးမထားမှုကိုပဲ သင် ပြန်ရလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်ကို လိုတာထက်ပိုပြီးအလျော့ပေးနေမိရင် အဲဒီလူရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုပဲ သင် ပြန်ရလိမ့်မယ်။လူတစ်ယောက်ကို လိုတာထက်ပိုပြီး ချစ်မိခဲ့ရင် အဲဒီလူရဲ့အကြင်နာမဲ့မှုတွေကိုပဲသင် ထွေးပွေ့နေရတတ်တယ်။လူတစ်ယောက်ကို လိုတာထက်ပိုပြီးအရောဝင်မိရင် အဲဒီလူရဲ့မလေးစားမှုတွေကိုပဲသင် ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ အရာအားလုံးမှာ လိုတာထက်ပိုသွားရင် ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးရလဒ်ကိုပဲ သင်ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ Credit Reflection လိုတာထက် ပိုသွားမိရင် လူတစ်ယောက်ကို လိုတာထက်ပိုပြီးဂရုစိုက်မိရင် […]
အချိန် အချိန်ဟာ မျှတပါတယ်လူတိုင်းကို တစ်ရက် ၂၄ နာရီပဲ ပေးထားပါတယ်။တန်ဖိုးထားတဲ့သူ တန်ဖိုးဖြစ်သွားသလိုဖြုန်းတီးတဲ့သူ အတွက် ဘဝပါ ပြုန်းတီးသွားစေပါတယ်…။ အချိန်ဟာ လက်တွေ့ကျပါတယ်အတိတ်ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ပြန်သွားလို့မရတော့သလို၊ အနာဂတ် ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ရှေ့မတိုးလို့ မရပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် အတိတ်ကိုလည်းမဖက်တွယ်၊ အနာဂတ်ကိုလည်း မတောင်းတ၊ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ကို ရှူ့တတ်ပါမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါမယ်…။ အချိန်ဟာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်ဘယ်လောက် ဝေးတဲ့ခရီးဖြစ်ဖြစ် သွားရင်း သွားရင်းနဲ့နီးသွားပါတယ်။ဘယ်လောက် မြင့်တဲ့ တောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် […]
“မငျး ဖတျ ရ တာ တနျ ပါ တယျ”
လူတစ်ချို့… မင်းကို စွန့်ပစ်သွားတယ်ဆိုတိုင်း မင်းက တန်ဖိုးမရှိလို့ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ချို့… မင်းနားမှာ မပျော်တော့ဘူးဆိုတိုင်းမင်းက အသုံးမဝင်တော့လို့ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ချို့… မင်းကို အရေးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတိုင်းမင်းက လူရာမဝင်တော့လို့ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့… မင်းမေတ္တာ မင်းစေတနာ မင်းရဲ့ပေးဆပ်မှု မင်းရဲ့အလေးထားမှုနဲ့ မတန်တဲ့သူတွေရှိသလို အရမ်းချစ်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ရရင် လူတွေက တန်ဖိုးမထားချင်ကြဘူး ဒါကိုမင်းသိရင် နောက်တစ်ခါ ဘယ်အရာကိုမှ အလကားမပေးနဲ့။ စွန့်ပစ်ခံရတယ်ဆိုတိုင်း အမှိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည် […]